အဘယ်အရာကို Oviedo မြို့၌ကြည့်ပါ | ခရီးသွားသတင်း
စူစန်နာ Garcia က | | ယေဘုယျ, Oviedo
ငါတို့ကနောက်ထပ်နည်းနည်းထွက်ပြေးဖို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ကြိုက်မှာသေချာတယ် Oviedo တူသောတစ်နေရာရာကိုခံစားပါစပိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ Oviedo သည် Asturias ၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏မြို့ဟောင်းနှင့်တူသည်။ ဒီလည်ပတ်မှုတစ်ခုသည်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်အကောင်းဆုံးခရီးသွားများအတွက်ဖြစ်သည်။
ဘာတွေလဲကြည့်ရအောင် Oviedo မှာအဓိကစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာများ။ အကယ်၍ သင်ထွက်ပြေးဖို့သွားမယ်ဆိုရင်ဘာကိုမှမလွတ်နိုင်အောင်ဒီမြို့မှာငါတို့မြင်နိုင်တဲ့အရာအားလုံးနဲ့စာရင်းပြုစုထားတာပိုကောင်းတယ်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်ခဲ့သည့်နေရာတစ်ခုစီကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်သည်။
2 Oviedo ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရင်ပြင်
3 Trascorrales ရင်ပြင်
6 ဝိုင်လမ်းကြောင်းနှင့် Gascona လမ်း
9 Naranco တောင်တန်းနှင့် Pre-Romanesque
ဤသည်မြို့၏အထင်ရှားဆုံးရင်ပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Fontánကရေအိုင်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးဒီမှာလာဂွမ်လေးတစ်ခုရှိနေလို့ပါ စျေးကွက်အလယ်ခေတ်တွင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ရာစုနှစ်များစွာအကြာတွင်၎င်းသည်ခြောက်သွေ့ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းယနေ့တွင်ရေထွက်ရှိသည့်ပိုက် ၂ ခုကျန်ရှိနေသည်။ ဒီစတုရန်းမှာလှပတဲ့အိမ်ဟောင်းများကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့လသာဆောင်များနှင့် Arcade များအတွက်ထွက်မတ်တပ်ရပ်။ ဤနေရာတွင်တစ်ပတ်လျှင်ရက်ပေါင်းများစွာစျေးကွက်တစ်ခုလည်းရှိပြီး၊ စတုရန်းတွင်မြို့၏ရုပ်ပွားတော်အချို့ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ တိုတောင်းသောရပ်တန့်ခြင်းနှင့်တစ် ဦး cider ရှိသည်ဖို့ဘားအချို့လည်းရှိပါတယ်။
ဒီစတုရန်းမှာ Oviedo ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဟာ Santiago de Compostela ဆီကို ဦး တည်တဲ့ဘုရားဖူးတွေအတွက်လမ်းခရီးတနေရာဖြစ်တယ်။ သူ့နာမည်က Santa Iglesia Basilica Catedral Metropolitana de San Salvador de Oviedo။ ယင်း၏သန့်ရှင်းသောခန်းမ၌ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အရေးအပါဆုံးရှေးဟောင်းပစ္စည်းအချို့ရှိသည်။ ဤသန့်ရှင်းသောအခန်းသည်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာလည်းဖြစ်သည်။ Plaza de la Catedral မှာမွို့မှာရှိတဲ့လူသိအများဆုံးရုပ်ပွားတော်တွေဖြစ်တဲ့ Regenta ရဲ့ရုပ်တုကိုငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်။
ဒါကတစ်ခုဖြစ်တယ် Oviedo မြို့၌အများဆုံးစစ်မှန်ရင်ပြင်ကွဲပြားခြားနားသောတန်ချိန်ပိုမိုပုံမှန်အဆောက်အ ဦး များကြည့်ဖို့ရာအတွက်။ ဒီစတုရန်းထဲမှာ Plaza de la Burra လို့လည်းသိကြတဲ့အတွက်ဒုတိယနာမည်ပေးတဲ့ရုပ်တုကိုတွေ့တယ်။ ၎င်းသည်ဒိန်ခဲနှင့်နို့ကိုရောင်းချသည့်စတုရန်းနေရာဖြစ်သောကြောင့်သူမနှင့်အတူနို့တိုက်ကျွေးမှုနှင့်အတူလိုက်ပါသွားသည်။ ဒီစတုရန်းမှာအရင်ကငါးရောင်းတဲ့wasရိယာဖြစ်သည့်ပြပွဲခန်းမလည်းရှိသည်။
ဤဥယျာဉ်သည်မြို့လယ်ခေါင်တွင်တည်ရှိပြီးအလွန်ကောင်းစွာဂရုစိုက်ပြီးနောက်ထပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်လည်ပတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပန်းခြံကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ရေကန်ငယ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းဘေးနှင့်ကပ်လျက်တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ရာတွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သောရုပ်ထုများကိုတွေ့ရှိရသည်။ အကြောင်းဖြစ်သည် Mafalda ၏ရုပ်တု, ငါတို့သူမ၏ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာထိုင်စောင့်ဆိုင်းနေသူ။
သင်ထုတ်ယူလျှင် စျေးဝယ်ရန်အချိန်ရောက်ပြီ၊ ယူရီယာလမ်းဖြင့်သင်ရပ်သင့်သည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးစျေးများတည်ရှိသည့်စျေး ၀ ယ်ခြင်းလမ်း၏ထူးခြားချက်ဖြစ်သည်။ ဤလမ်းသည် Parque San Francisco မှမီးရထားဘူတာသို့သွားပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကစျေးဝယ်ခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဖျော်ဖြေရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
ဝိုင်လမ်းကြောင်းနှင့် Gascona လမ်း
သင်လုပ်ချင်တာကဤမျှလောက်လည်ပတ်မှုမှအနားယူရန်ဝိုင်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါကသင်၌ရှိသည် Manuel Pedregal လမ်း။ ၎င်းတွင်သင်သည်အကောင်းဆုံးလေထုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ထို့အပြင် Oviedo မွို့၌သငျ cascines ၏ culines ရှိသည်ပုံမှန် Gascona လမ်းကိုဖြတ်ရမည်။ ဤတွင်သင်က Asturias တွင်အကောင်းဆုံးအစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစားသောက်ရန်နှင့်စားသောက်ရန်နေရာများစွာကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ဒီမြို့မှာစိတ်ဝင်စားစရာပြတိုက်တွေလည်းရှိတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် မကြာသေးမီကပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအနုပညာပြတိုက်။ ၎င်းသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအနီးရှိသမိုင်းဝင်စင်တာတွင်ပြန်လည်မွမ်းမံထားသောအဆောက်အအုံတွင်တည်ရှိသည်။ အနုပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနုပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်းနေရာနှင့်၎င်းအတွင်းရှိအရာနှစ်ခုလုံးကိုခံစားထိုက်သည်။ ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်သည် San Vicente ၏သီလရှင်ကျောင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းတွင် Asturias နှင့် Humanity တို့၏သမိုင်းကြောင်းကိုသင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။
Oviedo မြို့မှာတစ်ခုခုရှိမယ်ဆိုရင်သူဟာရုပ်ထုတွေဖြစ်ပြီးတစ်ရာကျော်လမ်းများတစ်လျှောက်မှာပြန့်ကျဲတည်ရှိနေသည်။ ရုပ်ထုတွေကိုရှာဖွေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့ကအကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ဖြစ်တယ်၊ မြို့ထဲမှာလူအများအပြားရှိပြီး၎င်းရဲ့ဘယ်ထောင့်ကိုမဆိုလက်လွှတ်မသွားဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အကောင်းဆုံးလူသိများသူအချို့သည် Mafalda, Woody Allen ဒါမှမဟုတ် Regenta.
Naranco တောင်တန်းနှင့် Pre-Romanesque
Oviedo အနီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Peninsula တစ်ခုလုံးတွင် Romanesque အရေးအကြီးဆုံးသောအရေးအခင်းကိုသတိမရပါ။ Narnaco တောင်တန်းပေါ်တွင်မြို့၏လှပသောရှုခင်းများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သောရောမခေတ်မတိုင်မီကချာ့ချ်သုံးခုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကိုရည်ညွှန်းသည် San Miguel de Lillo၊ Santa María del Naranco နှင့် San Julián de los Prados.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » အဘယ်အရာကို Oviedo တွင်ကြည့်ပါ